Iphrofayili Yenkampani | Ukulinganisa kwenkampani Winby Industry&trade Limited
Umhlinzeki wamakhandlela ochwepheshe iminyaka engaphezu kwengu-20
Winby ikhandlela inefektri eyakhe ukukhiqiza lonke uhlobo lwamakhandlela anephunga elimnandi.Sinolwazi olucebile, ubuchwepheshe obuvuthiwe emakethe yamakhandlela cishe iminyaka engama-20. Futhi sineqembu lochwepheshe elizonikeza isevisi engcono kakhulu namakhandlela kumakhasimende ethu avela emhlabeni wonke.
Sikholelwa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo nesevisi ingumphefumulo webhizinisi ukusiza amakhasimende onge isabelomali nesikhathi. Ukunikeza ikhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana kuyisiqinisekiso sobudlelwano bethu obuhlala njalo bokubambisana. Kuze kube manje, sesibambe iqhaza kuCanton Fair iminyaka. Nazi ezinye izithombe nekhasimende lethu ukuze uthole ireferensi yakho.
Ukuze uthole impahla eluhlaza, sisebenzisa i-wax kapharafini, i-soy wax, ingcina yezinyosi kanye nezinye izitshalo ze-wax emakhandlela ethu.
Ukuze uthole iphunga, sisebenzisa izinhlobo ezingaphezu kuka-100 zephunga elimnandi emakhandlela anephunga elimnandi. Abahlinzeki bethu bephunga elimnandi ngamakha e-CPL, ama-symrise. Zonke ziyizinhlobo eziphezulu zabahlinzeki bephunga emhlabeni.
Sisebenzisa udayi we-wax wekhandlela ovela ku-Bekro, inkampani yamakhemikhali edumile yaseJalimane. Udayi wabo we-wax wekhandlela uzinzile kakhulu, awuhambisani nemvelo.
Ezinye izinto zinga-odwa ngenani elincane.
Amakhandlela anephunga elimnandi angasetshenziswa ezindlini zokugezela, emahhovisi, emagumbini e-yoga, amagumbi okwelapha ingqondo, namakilabhu, njll. Amakhandlela anephunga elimnandi angadambisa isimo futhi akubekele indawo yephunga elimnandi nenhle.
Sicela uqaphele: Uma uvutha ikhandlela elinephunga elimnandi, iminyango namafasitela angavalwa imizuzu engu-10-30, ngokuvamile kuzokwenza igumbi ligcwaliswe ngephunga elihambisanayo, umphumela ubonakala uma ungena ekamelweni uvela ngaphandle. Amakhandlela anephunga elimnandi kufanele agwenywe ezindaweni lapho ukugeleza komoya kushesha khona, okuzonciphisa kakhulu isipiliyoni sokusebenzisa.